Limonite: gini bu ihe, gini ka eji ya na otu esi amata ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ịnweta ihe na - adịghị mfe dịka. Ọ bụ mineral nke mejupụtara, n'aka nke ya, nke ngwakọta nke mineral na-adaba n'ime klaasị. Ọ bụ ihe gbasara mmọnwụ Nke a bụ mineral nke ụdị mineral ndị ọzọ dị n'ime klas nke oxides ma marakwa goethite.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na njirimara nke limonite.
1 Gịnị bụ limọnụ
2 Limonite na-eji
3 Otu esi amata ya
4 Ebee ka ịchọta ya
Gịnị bụ limọnụ
Ọ bụ ụdị ịnweta nke nwere ọtụtụ mineral oxide na enwere ike ịpụta ya n'ụdị nke ihe ndị ọzọ nwere ogo dị iche iche. N’etiti mineral ndị a anyị nwere hematite, magnetite, hisingerite, jarosite, lepidocrocite, n’etiti ndị ọzọ. O so na klas nke oxides ma nwee agba aja aja. Na ike ike ọ bara uru nke 5.5.
Ejirila mineral a na mmepeanya izizi. E jiri ya mee ihe ịchọ mma ma n'ụlọ ma n'ime ụlọ ọrụ azụmahịa dị iche iche ma ọ bụ ụlọ ọrụ kemgbe mgbanwe mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ na-eji ya mgbe mgbe na ọ nwere ike ịbụ n'ụzọ dị mfe n'ime a dai e ji esiji ákwà ma ọ bụ dị iche iche akwa ihe.
Ọ nwere nnukwu egosipụta mgbe ọ na-eji. Nke ukwuu ka enwere ike iji ya na ụwa eserese iji nye ụda ocher dị iche iche ka ọ rụọ ọrụ. Ọtụtụ ndị na-ese ihe jiri limonite mee ihe osise ha. Iji jiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ha ga-egwe ha ma hụ otú ọ ga-esi jiri nwayọọ nwayọọ ghọọ uzuzu. Nke a bụ ịnweta enweghị ike iji ya na agba ahụ, ma aghaghị ịgwakọta ya na ihe ndị ọzọ ka o wee nwee ike ịdị n'otu ma nye ya mmetụ dị mkpa na eserese.
N'ọhịa nke owuwu, ejiri ya mee ihe na limonite ka ihe owuwu ahụ nwee ike iguzogide oge. N'ụwa nke eserese taa anaghị eji ya. Iji nye nkwekọ na ọrụ ahụ, n'oge a, a na-eji ụdị ihe ndị ọzọ eme ihe dịka ụmụ nwanyị iron. A na-achọta igwe kachasị mma n'ime limonite. Ọ bụrụhaala na anyị emee ọgwụgwọ zuru oke, enwere ike ịtọhapụ ígwè n'ime mineral a ka o wee nwee ike iji ya zuru oke. A na-ejikwa mineral Limonite mepụta fatịlaịza na nri na-eto eto maka ahịhịa dị iche iche.
N'ezie, ọ nwekwara ụfọdụ ihe anwansi ma ọ bụ ihe omimi. Ma ọ bụ na a na-eji mineral a eme ihe na geotherapy ebe ọ bụ na echere na ọ nwere ike ịnwe ụfọdụ ọgwụgwọ. A na-ekwu na ha nwere ike inye ndị mmadụ nwere ume na ume n'ike mana ha amaghị ka esi hazie onwe ha iji mezue ebumnuche ha. Ọ bụkwa ịnweta nke na-eje ozi iji nwee ike ịdị jụụ nke mmụọ ma jikwaa iwepụta ike dịka onye ọrụ chọrọ.
Na geotherapy, a kwenyere na limonite bụ ọla edo na agba, ọ nwere ike inye aka melite ùgwù onwe onye na ọnọdụ nke onye ahụ n'elu ya.
Otu esi amata ya
Ọ bụ echiche na-ezighi ezi na limonite bụ naanị ịnweta. Could nwere ike ịsị na ị na-eleba anya na sayensị ka a na-ewere ya dịka ụdị okwute. Na nkọwa nke oke nkume anyị na-ahụ na ọ bụ njikọ nke mineral abụọ ma ọ bụ karịa mgbe usoro usoro ọdịdị ala na-adịgide ọtụtụ puku afọ. N'okwu a, anyị na-ahụ otu ụdị ịnweta nke, n'aka nke ya, nwere mineral ndị ọzọ. Iji ghọta ma anyị na-eche ihu ịnweta, anyị ga-amụ ihe mejupụtara ya.
Na isi mejupụtara anyị na-ahụ na ọ nwere ihe mejupụtara site na mineral oxide ferrous dị ka goethite na lepidocrocite. Fọdụ ndị ọkachamara maara nke a ụdị ịnweta aha ya bụ ocher n'ihi na ọ na-anọchi anya ya na agba. N'iburu n'uche ụdị ihe mejupụtara ya, ọ bụghị ihe kachasị akpọ oku ịnweta. Limonite enweghị ike ịmalite ozugbo, mana ha chọrọ ụdị ígwè iji nwee ike ime ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ nkwụnye ego maka ụdị mineral dị iche iche ma chọpụta limonite, ọ ga-abụ na enwere igwe igwe dị nso.
Ebe ọ bụ na anyị ahụla na ihe mejupụtara ya bụ nsonaazụ dị iche iche nke ihe dị iche iche, a na-ewere limonite ka ọ ghara inwe kemịkal siri ike. Naanị ndị ọkachamara bụ ndị nwere ike nyochaa mpaghara niile ebe achọtara ha yana ihe oxide mejupụtara bụ akụkụ nke akụkụ nke mineral a.
Ebee ka ịchọta ya
N'adịghị ka ihe na-emekarị na mineral ndị ọzọ, ọ bụghị ihe nkịtị maka limonite na-etolite na nkume na silicate ma ọ bụ carbonate. Nke a egosighi na nke a enweghị ike ịbụ ikpe. Ohere ha nwere ike ime n'ụdị ọdọ a dabere n'ụdị ihu igwe. Ihe puru omume nke limonite nke na eme na odo silicate ma obu carbonate nwere ike ime na ebe udu ala.
A na-eburu n'uche na igwe oxide dị mkpa maka ihe ahụ iji mechaa akpụ. Ihe kpatara nke a bụ na ọ ga-enwerịrị ụfọdụ nje na-eme ka ọ kwe omume. Bacteria naanị nwere ikike ịmụpụta na apiti mmiri na ọnọdụ ndị yiri ya. Nkwụnye ego Limonite dị n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Ihe kachasị mkpa dị na mpaghara ebe okpomọkụ na ebe a na-ekpo ọkụ dịka nkwụnye ego dị na Brazil, India, Cuba, Congo na ụfọdụ na Canada.
Na Spain anyị nwere ụfọdụ nkwụnye ego nke mineral a dị ka mines nke Teruel ma ọ bụ Vizcaya. Agbanyeghị, a naghị ele ebe ndị a anya.
Dịka eziokwu na-adọrọ mmasị, anyị nwere ike ikwu na ndị ọkà mmụta banyere ala na-ewere na limọnite na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ụwa ma na ọ na-enyere aka iwughachi mineral mineral. N'ihi ụdị mineral ndị a, anyị nwere ike ịghọta akụkọ ihe mere eme nke ụwa anyị nke ọma.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere limonite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara limonite